DF Soomaaliya oo ugu dambeyn lagu wareejiyay Ammaanka Dhuusamareeb | HalQaran.com
DF Soomaaliya oo ugu dambeyn lagu wareejiyay Ammaanka Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Ciidamadda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wareejinayaa amaanka Magaaladda Dhuusamareeb inta uu socda Shirka dib u heshiisiinta ee Maamulka Galmudug.
Khilaaf ayaa ka taagnaa maamihii dambe cida sugaysa amniga magaaladda Dhuusamareeb inta uu shirka socdo, waxaana Dowladda ay ku guuldareysatay In ciidamo ay geyso Magaaladaas.
Munaasabad si toos ah dowladda loogu wareejiyay amniga Dhuusamareeb ayaa ka dhacday maanta magaaladaas, waxaana ka qeyb galay Wasiiro ka tirsan Xukuumadda, sida Wasiirka Amniga, Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo xildhibaanadda kasoo jeeda Magaaladda Dhuusamareeeb.
Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in Ciidamada kala duwan ee ku sugan gudaha Dhuusamareeb bannaanka loo saarayo, halka amniga gudaha la wareegayaan Ciidamo gaar ah oo dowladda Federaalka diyaarisay.
”Ciidamada kala duwan ee ku sugan gudaha magaalada Dhuusamareeb, waxaa loo saari doonaa bannaanka magaalada, waxaana amniga gudaha magaalada la wareegaya Ciidamo gaar ah oo dowladda Federaalka diyaarisay”, ayuu yiri Sheekh Shaakir.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa muuqata in ay ku guuleysatay qorshihii amniga ee Galmudug, xili Ra’iisul waasaare Xasan Cali kheyre uu wali ku sugan yahay Magaaladda Dhuusamareeb.